Ciidanka Kenya ayaa Kismaayo Haysta! | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidanka Kenya ayaa Kismaayo Haysta!
Kismaayo (KON) - Sidaan Saakay soo Qornay, Dagaal khasaare aan la soo koobi karin dhaliyay ayaa Magaalada Kismaayo ka socda Maalintii Sadexaad.
Wariyahayaga Keydmedia oo ku sugan Magaalada Kismaayo oo aan mar dhaweyd Khadka Telefoonka ku wareysanay ayaa noo sheegay in Ciidamada Kenya iyo kuwa Kooxda A. Madoobe lagu arkayo Xaafadaha Magaalada Kismaayo sida Xaafada Guul-wade iyo Via Afmadoow oo Maalmihii la soo dhaafay ay Gacanta ku heyn jireen Ciidamada Degaanka ay horkacayeen Cumar Buraale, Barre Hiiraale iyo Iftiin Xasan Baasto.
Wariyaha Keydmedia ee ku sugan Magaalada Kismaayo: “Ciidanka Dowladda Kenya oo Dagaalka si toos ah ayeey uga muuqdaan, waxayna Burburiyeen Guryo, waxay Gubeen Gaadid Shacab Qofkii ay Arkaana Xabad bay ku dhajinayaa“.
Gawaarida Gaashaaman iyo Taangiyada oo ay ku Qoranyihiin Summada AMISOM ayaa waxey Madaafiic ku garaaceen Xaafadaha Kismaayo, Madaafiicdaas ayaa waxey Dhulka dhigeen Guryo badan, halkaasoo ay ku dhinteen Dad aan ilaa iyo hada tiradooda la garan karin.
Xaalada Magaalada ayaa wali kacsan.
Wixii kusoo kordha Kismaayo kala soco Keydmedia Online